TOP DHAGEYSO:- Maxay ka wada hadli doonaan Madaxda Galmudug & Puntland oo Gaalkacyo ku shiraya? – XAMAR POST
TOP DHAGEYSO:- Maxay ka wada hadli doonaan Madaxda Galmudug & Puntland oo Gaalkacyo ku shiraya?
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa la filyaa in ay ku kulmaan Madax ka kala socota Mamulada Galmudug iyo Puntland si loo dhameeyo wadahadalo horay u socday oo ku saabsan amniga Magaalada Gaalkacyo.
Horay ayaa waxaa Magaalada Gaalkacyo uga wada kulmay labada Madaxweyne ku xigeen ee Galmudug iyo Puntland Maxamed Xaashi Carabeey iyo Cabdixakiin Xaaji Cumar Cameey, taas oo suurtagelisay in Ciidamada iskudhaf ah loo sameeyo Magaalada Gaalkacyo.
Kulamadaan oo maalmo qaadan doona ayaa la filayaa in ay ka kala dhacaan Waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo oo ay gacanta ku hayaan labda dhinac ee Puntland iyo Galmudug.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Maamulka Galmudug Maxamuud Cismaan Cabdulle Beereey, ayaa Warbaahinta u faah faahiyay wadahadalada Madaxweyne ku xigeenada Galmudug iyo Puntland uga furmaya Magaalada Gaalkacyo.
DAAWO VIDEO:- Maamulka Galmudug oo markii ay soo qabteen sarkaalki ONLF Qalbi Dhagax ula dhaqmay si fool xun.